Empeleni lanamuhla, ifomu imisebenzi zemfundo, ngokuthi yokufunda project-based, ingenye eziphambili kakhulu futhi kungase kutholakale okusebenzayo ekuthuthukisweni zezingane nemfundo. Ngokusekelwe kulolu hlobo ukuqeqesha ukuqaliswa thize ukuqeqeshwa amaphrojekthi, sithwele eziyinkimbinkimbi, phakathi okuyinto anikezwa ikhefu injongo ukumuncwa kangcono kanye nokugcinwa lwazi aluthola. Umuntu owasungula le umqondo yokufunda ngokusebenzisa okusalungiswa kwaba Dzhon Dyui - nososayensi waseMelika.
Hlobo luni umumo?
Injongo eyinhloko yawo inqubo yemfundo wenza uphenyo ngokushesha imvelo ezungeze ingane. Ehamba abafundi uthisha aphethwe elide ezinezithelo, sihambela eyodwa project kwenye. Ngamunye wabo iqoqo kancane kancane yinkimbinkimbi imisebenti leyentiwako nokuthuthukisa futhi enze ukuba izingane.
Indlela kusekelwe ngekhono lomuntu ehlukile ngoba umsebenzi wokusesha. Ngamunye the amaphrojekthi kufanele kube mnandi, baqaphe izingane uzivivinye ezithakazelisayo futhi ewusizo, ukuze sivuse intshiseko. Ukuxazulula imisebenzi lokho, izingane zifunda amakhono abalulekile ezifana goal setting, ngokukhetha indlela efanele ukuwufinyelela, ukuhlolwa umthelela. Bafunda ukucabanga futhi baqala ukuzizwa umthwalo izinqumo ezizokhuthaza kwengqondo. Ulwazi nokuhlakanipha kwengane sikhulela njalo, ekuthuthukiseni amakhono, ukuthuthukisa lokusungula, ilukuluku, kanye ezihlukahlukene nezinye izici ewusizo.
Ngesisekelo imfundiso yokuziphendukela yokufunda usebenzisa iphrojekthi Kusekelwe postulates ezimbalwa eziyisisekelo, okuyilezi:
1. uyisizinda sayo yonke imisebenzi ukufundisa ubuntu umfundi.
2. logic of imisebenzi phrojekthi kumelwe ncazelo kuqondwe ingane, ngaphandle okuyinto kushukunyiswe ulwazi kuzoncishiswa.
3. Ngamunye abafundi ukusebenza esakhiweni ngejubane yabo ngokusho ezingeni yabo siqu yentuthuko.
4. Kufanele ukhuthaze ukusetshenziswa lwati lolutfolakele ezihlukahlukene ezimweni, okuyinto enomthelela nokwenziwa yabo ngokujulile futhi bayezwa.
Projects ziyahlukahluka - ngokuvumelana umsebenzi linqoba ukuba ucwaningo, monoproekty lokusungula, umkhuba ngamakhasimende noma umdlalo (esiqintini-role ifomu), ubunjalo Ukusabalala endaweni kuncike okuqukethwe bungabonakala (lwenteke phakathi kwesigaba ethile theory), noma imikhakha eyahlukene, esehlanganise nje iqoqo ezahlukene izindawo.
amaphrojekthi ezahlukene kanye nemvelo iqhaza. Ngokwesibonelo, izifundo kwemvelo izingane ungentiwa phakathi abafundi neqembu elilodwa noma ambalwa, futhi ingase ihlanganise yonke yokwakheka pre-school, noma umthombo othile ongaphili esifundeni sonke. Inani abahlanganyeli ingase futhi ibe khona ehlukile.
Kukhona amaphrojekthi okuyizinto uhlamvu ngabanye, kanye kabili, neqembu elincane noma emaqenjini. Kuye isikhathi somcimbi, bahlukene zibe yesikhathi esifushane (ubude okuyinto ibekwe abasemakilasini eyodwa noma ngaphezulu futhi kuthatha ingqikithi amaviki amabili), esikhathini esiphakathi (kufika ku ngenyanga eyodwa) kanye nasesikhathini eside (ubude kusukela ezinyangeni omunye eziyisithupha noma ngaphezulu).
Yini okufanele kucatshangelwe
Ngokwethulwa ubuchwepheshe yalolu hlobo ukuqeqeshwa kuyadingeka ukuba banamathele nezimfuneko ezithile.
1. Umsebenzi lufakwa phambi kwezingane, kufanele kubaluleke kubo ngokuya lokusungula futhi isithakazelo ucwaningo.
2. Imiphumela aphoqelelwe ukuba baphathe kokubili value lehlukene ekucabanga kwengcondvo netintfo esisebenzayo.
3. Gxila umsebenzi ezimele abafundi kufanele enqoba.
4. Okuqukethwe kwesibopho ngokucacile olwakhiwe.
5. Kuyadingeka ukwethula izinhlobo ezahlukene kanye nezindlela zocwaningo - ngokucwaninga futhi ucwaningo ukuqhamuka.
Yiqiniso, kufanele sikukhumbule ngaso sonke isikhathi engu balezi zingane. Ngokusho lokhu umbandela, umsebenzi project lezingane zasenkulisa ikhona emazingeni amathathu ahlukene.
iphrojekthi Environmental eqenjini abasebasha enkulisa
Izingane ezineminyaka engu-3.5 kuya kwezingu-5 edlule, angabizwa ngokuthi imitative kahle. Izingane ngalesi yobudala akudingeki isipiliyoni ukuphila, ezingeni intelligence futhi lokusungula namanje yabo sasivumela ongaphakeme. Ngakho-ke, i-project kwemvelo eqenjini abasebasha enkulisa uncika ikakhulukazi kuphela izenzo thishela - unolwazi izinqumo ngenkathi izingane ongakwazi ukuzenza.
Lo mfundi, ezwakalisa izidingo kanye ukubonisa isithakazelo kothile endaweni ethize zokuphila kwakho kungaba abe "ikhasimende" iphrojekthi ethize. Ukuyiqonda injongo yangempela yokunikezwa ke, izingane zama sokulingisa ezingeni umnakekeli ukwenza imisebenzi. Kanye izingane uthisha ezama ukuhlaziya imiphumela.
Ngisho nemizamo isenzo esizimele nesizotha kakhulu kufanele ikhuthazwe ukuba badumise izingane ngokuthatha isinyathelo ukugubha zonke ezicini ezinhle ekuthuthukisweni kwabo.
Lapho izingane sezikhulile
Enye into - iphrojekthi kwemvelo eqenjini phakathi enkulisa. Lapho ngineminyaka engu-iminyaka emihlanu noma izingane ezingaphezu bavame ukuba khona isipiliyoni ezithize kokuphila komphakathi. Ojahidada ngalesi yobudala ukwazi ukuthi ukukhulumisana okunjalo nontanga nokubambisana, babe nakhululwa ezifundisweni zokucathula isinyathelo kabi amandla akhe, ukuzithiba kanye nekhono ukuhlola ngokwabo kanye nabanye. nokwanela ezingeni nokuxhumana nontanga kakade sezingeni eliphezulu.
Izingane ezingaphansi kweminyaka amandla ukuqaphela inkinga, kucacisa bahlanganise umgomo bese ukhetha indlela esifanele ukuwufinyelela. usizo Adult liyadingeka kulokhu ngezinga elincane kakhulu. iphrojekthi Environmental eqenjini phakathi enkulisa kungenziwa ngokuthi ukuthuthukisa.
Khona - ezithakazelisayo nakakhulu
Ekupheleni konyaka kweziyisithupha zokuphila, kanye nesazisi wengane lwesikhombisa Kumiswa ngokushesha, futhi kuyinkimbinkimbi iphrojekthi kwemvelo enkulisa. iqembu doshkolyat Landelayo ngezimiso eziphakeme izinga lokukhula njengenhlangano nabanengqondo futhi ubuntu. umsebenzi omdala ukusekela lokusungula futhi sakha isimo esikhuthaza ukudalwa kwasekuqaleni, ukuhamba okuhloswe akhethiwe kanye nokusentshenziswa kwe lezo zenzo esisebenzayo ezidinga iphrojekthi kwemvelo enkulisa. Iqembu senior abafundi uyakwazi futhi siqalise isinyathelo zokudala ngempela.
Project ngamunye kwemvelo enkulisa esiqhutshwa ukuhambisana ukulandelana oyifunayo. Ziyini izigaba kungaba? Okokuqala, kubalulekile ukukhetha themes nezinhlobo, kanye nenombolo kanye nokwakheka abahlanganyeli. Khona-ke kufanele ukuthi iyini ngempela inkinga futhi ukubeka ngenjongo ethile. Okulandelayo yinqubo uhlela izinyathelo eziholela ke, futhi leso sinqumo izindlela umsebenzi wokwakha nokusabalalisa imisebenzi phakathi abahlanganyeli.
Ngemva kwalokho, ngamunye kulabo abathintekayo kulo, abazisebenzako, isabelo ukuxazulula ekhishwe kuye. Phakathi, idatha kuthiwa eqinisekisiwe futhi saxoxa, ngemva kwalokho yabo yi ngabanye ngayinye abahlanganyeli uyalondeka. Ucedzela zonke nithole nesiphetfo lesingakalungi kunesidingo.
Ubani okufanele bahlanganise ingcikitsi netinhlobo inkinga? Lona umsebenzi we uthisha, ikhumbula izithakazelo zezingane noma abafundi isinyathelo siqu nangokusebenzisa abadala ukuba imibuzo eholela empendulweni.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ubuchwepheshe yokufunda project ezisekelwe kuwo wonke inzuzo yayo omkhulu akulula futhi kufinyeleleke. Le ndlela umsebenzi kudinga isikhathi esiningi esiningi, kanye nokuba khona abafundisi lokusungula, ukubekezela okukhulu kanye nenhlonipho ngamunye izingane. othisha Preschool akufanele baphoqeke nezinhlangano ezisebenza nezingane kuleli fomu ikakhulukazi - ikhambi uthatha kuphela uthisha yena.
iphrojekthi Environmental enkulisa: Preparatory Group
Manje ake ukuhambisa kusukela ithiyori abakuyo. Njengoba isibonelo, cabanga iphrojekthi kokuqukethwe kwemvelo ngesihloko esithi "Singabangane nobunjalo, udoti asimdingi." Yena igxile izingane ezineminyaka engu eminyakeni 6-7 futhi kuhilela izinto eziningi abahlanganyeli esuka kubantu abangu-10.
Ukwenza umsebenzi, uthisha uthola passport okuthiwa yephrojekthi, lapho zonke izici zako ezisemqoka izofakwa ohlwini. Cacisa kwemigomo iphrojekthi yethu: e uhlobo kubhekisela ekwazisweni nocwaningo, nokuqukethwe kwalo kuhilela kokuvula isihloko "Izingane kanye nokuvikelwa imvelo", abahlanganyeli ezakha project yethu kwemvelo enkulisa - iqembu wokulungiselela kwebafundzi, othisha nabazali.
Lena - project collective, isikhathi sihlobana wesikhathi esifishane. The main nezindaba kuphakamisa - Umqondo nokuvikelwa kwemvelo kanye nemizamo ukugxila "ukungcola" nezindaba. Amaphrojekthi "Yondla uhlobo bomdabu" e zasenkulisa bayintandokazi ngenxa ukuhlobana isihloko futhi ukutholakala ukuqonda zezingane.
Umqondo isihambile nguthishela, yilesi: uma udoti ukuthi ukuxosha zonke izinsuku, alungise, ngamunye inqwaba ngabanye ke kungenziwa kabusha ukuze imvelo ayiphazamiseki. Noma mhlawumbe kusukela imfucuza izovuleka yezandla ku kudingidwa izinkinga zemvelo?
Engxenyeni theory yephrojekthi kubalulekile ukuze bathethelele ukuphuthuma inkinga wakhuliswa. Kulokhu sikhuluma ikhono engu wengane ukuhlaziywa abaqaphela izenzo zabo futhi kwathatha ileveli entsha nobuhlobo obungokomzwelo nokubaluleka. kwakhiwa Personality is ngokuhlakanipha hhayi kuphela, kodwa ngisho nangendlela yokuziphatha. Lo mntwana kakade uyazi amandla iningi emhlabeni ibhekene nezinkinga zemvelo. Umsebenzi ongoti - yisikhathi ukuthola izindlela ilungelo lemfundo kwemvelo. Ukuqeqeshwa Yiqiniso "Izwe elisizungezile" ku Dow iyoba usizo ezinhle eziyisa kuthisha.
Izingane enkulisa nsuku zonke ukuhamba, lapho kufanele iqhaza ahlanzekile-up bese ubuka njalo isamba esikhulu imfucuza. abafundi kufanele uphushe isikhathi zibuze umbuzo olula - lapho udoti esithathwayo, lapho athathe, kwenzekani kubo esilandelayo.
Iphuzu eliyinhloko, okuyinto kufakazela umcimbi efanayo ezindabeni kwemvelo - kumiswa isiko kwemvelo kanye gxila isikhundla wokunakekela imvelo. Izinjongo Engokoqobo Yezindaba iphrojekthi kungenziwa ngokuthi izingane wamukele abameleli mayelana nezinhlobo futhi izakhiwo imfucuza yasekhaya, izingozi yabo nempilo yabantu nezilwane.
Environmental indaba ephathwayo enkulisa namuhla kakhulu, esiphuthumayo kakhulu. Izingane kudingeka zazi ukuthi imithombo eyinhloko nokungcoliswa kwamanzi nokungcola komoya, kanye nezinye imithombo yemvelo, imiphumela kungabangela umsebenzi womuntu, futhi yini okumelwe yenziwe ukuyivimba leyo nkinga. Nathishela kufanele azame ukuthola izindlela kabusha ukusetshenziswa kohlobo oluthile okungenamsoco impahla.
iphrojekthi Environmental enkulisa unezigaba eziningana. Eyokuqala yalezi - the wokulungiselela. Umsebenzi - ukuhlaziya isimo bese unquma yezinjongo eziyinhloko. Kulesi sigaba, uthisha kumele ayejwayele izinkomba nesipiliyoni asebenza nabo, kanye ukucacisa umqondo theory lomcimbi. Wabe eba Luyinkombandlela yomsebenzi ohlongozwayo, owawuthi silungiselela futhi uhlela izinto akhethiwe ukufundisa.
Isigaba sesibili kungenziwa ngokuthi yenhlangano. On kumele inikezwe imisebenzi kwemvelo Iqembu ukubandakanywa nomsebenzi wesikhathi esizayo abazali. Omunye amabhlogo kuhilela izenzo izingane ukuqashelwa izakhiwo iningi lezinto ezizungezile futhi izinto - epulasitiki, ingilazi, iphepha, lensimbi, iraba, nokunye.
Kufanele ubambe izingxoxo on isihloko ukungcoliswa kwemvelo imfucuza yasekhaya. Phakathi nomsebenzi unobtrusively kwakhiwa emakhono ekwati emvelweni ukuziphatha izingane. Mentor inikeza isethulo ezidingekayo kuya kulesitfupha ngesihloko leluleka abazali kanye qhashisa them iphephandaba self-ezenziwe.
Isigaba sesithathu - esisebenzayo. Umsebenzi ingena elula ifomu ulwazi kwemvelo ngokwethula izinhlobo ezithile. Ukusebenza kulesigaba, abazali anganika lemibuzo ukuze uthole ukuthi iqondeni izinga labo zamakhono kule ndaba, kanye nendlela isihloko iyafaneleka umndeni othize.
Imiphi imibuzo okufanele aqukethe lwemibuzo abazali? uhlu efakazela kubo kungaba kanje:
1. Luhlobo luni udoti Ufaka kakhulu nomndeni wakho ngeviki?
2. Ngabe iyiphi imfucumfucu uhlobo Wamukele?
3. Wenzani nge imfucuza - bashise, iya ikani likadoti, nokunye ..?
4. Ingabe unomkhuba Siwohloza okungenamsoco impahla izingane diy ezindabeni zemvelo, kanye ukuhlobisa igceke?
5. Ninazo umqondo ngezingozi ethwala imfucuza?
6. Ingabe kuyaqhubeka inkulumo umndeni wakho ukuthi izingane ngezingozi ethwala imfucuza?
7. Yini ongayenza ne udoti ngesikhathi uhambo egcekeni noma epaki?
8. Ingabe ukufunda izingane izincwadi ngakho? Ungakwazi yini ngokushesha akhuphuke idwebe isithombe kudingidwa izinkinga zemvelo?
9. Ingabe esibandakanyeka ahlanzekile-up egcekeni lakwakhe futhi noma uxhume ezinganeni zakhe?
10. Ingabe izingane zakho nomkhuba wokuphuza ukubanjwa njalo ukulahla udoti ngemuva noma yimuphi umsebenzi?
11. Ngabe wenelisekile ezingeni inhlangano imfucuza endaweni yakini?
12. Yikuphi ukusikisela ongazenza amasevisi edolobheni ngale ndaba?
Hlela ukuqapha ukulahla imfucuza ekhaya enkulisa. Njengoba zanqwabelana udoti, lapho ukukubeka njengoba athathe, lapho likhona urns kanye imigqomo kadoti? Kukangaki abazali ukuqeda kusaphaza okungaka?
amakilasi Esiwusizo izingane
Izingane kufanele tshela ngezinhlobo nezakhiwo izinto ezahlukene eziwazungezile ekuphileni kwansuku zonke, isibonelo, cabanga yephepha ngekwetinhloso letehlukene - amakhadibhodi, izicubu, newsprint, lukathayela. Vumela izingane sinake umehluko ikhwalithi izakhiwo - ngoba iphepha kungaba esobala noma cha, mncane noma uqweqwe, anolaka noma ecwebezelayo, ungadabula, crease, noma manzi ukuba ashise.
Ngokufanayo, izingane kufanele banikezwe ithuba lokuhlola zonke izinto ezitholakalayo eyenziwe ngepulasitiki, ukhuni ingilazi, kanyekanye benaka ubunjalo bomzimba kanye umthengi izakhiwo lezi zinhlobo zezindwangu. Bafanele bakwati kungenela ukunitshela yonke into nge uhlu izimfanelo yalo ebaluleke kakhulu.
iphrojekthi Environmental enkulisa inikeza inhlangano workshop yokudala, lapho amasampula ezinto i ezingenamsebenzi izoqoqwa. Izingane kufanele abonise kanjani yezandla amahle original wabo ungenza yezandla zabo. Kukhona umsebenzi we-slide show kanye nezethulo, kanye nokufunda izincwadi ulwazi, iphephandaba kwemvelo, idivayisi laboratory ukuhlolwa futhi ucwaningo.
Zonke - ngokwemvelo!
Isinyathelo efanayo ingase ihlanganise observation esisebenzayo, sihambahamba kanye nokuvakashela izindawo focus kwemvelo eduze ukunakekelwa ingane isikhungo emigwaqweni nasezindaweni amapaki. On ozohamba izingane kufanele banikezwe ithuba ukuhlunga ngokucophelela udoti futhi bebaqaphelisa kanjani udoti Akususiwe ungasabalalisa umoya.
Trip focus kwemvelo ingenziwa epaki eliseduze noma ihlathi. Hlola ukuthi kukhona udoti lapho, futhi lapho iningi. Uma izingane ezikuthola ukuhlanzwa eliyimfuhlumfuhlu kwesokunxele amaholide abanganaki, phawula indlela ugly kubukeka, nendlela abantu ezingemnandi uvakashele izindawo ezinjalo.
Uma e eduze zasenkulisa has a umthombo noma echibini elincane, kubalulekile ukuhlela uhambo ngaye futhi inqubo ikwenza kucace ukuthi abantu kufanele kwenziwe ukuvimbela ukusilaphazeka kwamanzi.
Emahlathini eduze Echibini
Kuyadingeka ukwethula izingane izinhlamvu kwemvelo, chaza injongo yabo. Izingane ungakwazi bebonke kulungiswe udaba iphosta "Londoloza Imvelo".
Funda uhlobo eziyisisekelo izinhlamvu, ngendlela ehlukile sifundo izingane ungakwazi ukujabulela womshini yabo. Yenza eziningana zalokhu amaphilisi, kufanele uhambe noma uhambo emvelweni nendawo kwechibi, ehlathini nokunye. N.
I enkulisa Kumele kwetfulwe ngokuvamile imfucuza ekuhlungeni - Broken izingxenye plastic amathoyizi eqoqwe in basket eyodwa kuya kwenye - ukusika iphepha ngemuva amaseshini ukuqeqeshwa. Okuqukethwe isitsha sesibili ukuba nezingane wangcwatshwa umgodi umquba.
Ukuhlolwa ngokuthi 'angcwabe udoti phansi "yakhelwe esikhathini eside. Le ndawo Nook wangcwatshwa emhlabathini eziningi imfucuza yephepha, iraba, plastic, metal, kanye amazambane peels, isikhumba orange, iingojwana amahlamvu. Indawo inophawu ngezibonakaliso ekhethekile.
Ngezikhathi ezithile izingane kufanele sibe nesithakazelo okuqukethwe "ulahla", ukuhlola umthelela imfucuza sangcwatshwa nesimo sezulu - ilanga, imvula. Ukuqaphelwa kufanele kafushane ezilotshwe idayari ekhethekile.
Ekupheleni ukuhlola izingane kufanele sifinyelele eziphethweni: yiziphi izinhlobo imfucuza zibole futhi yiziphi akuzona. Futhi indlela yokubhekana kukadoti, ukuze hhayi ukulimaza imvelo.
ngosuku olulodwa kungenziwa elalinikezelwe indaba ephathwayo ngemvelo nenhlangano nemibukiso thematic, didactic futhi imidlalo ongaphandle. amasampula Isentha elakhiwa imikhiqizo ezase. Uma iningi ziphephile izokwakhiwa izingane izandla, lokhu kungaba abe isifundo esiwusizo eliyigugu futhi ivuse isithakazelo Abadali abasha. Nikela - uthathelwe ezemvelo - unamandla okunipha ngisho umhlanganyeli omncane.
Esikhathini sokugcina, esigabeni sesine, kufanele afingqe, afingqe ezikufundile. Lokhu kungenziwa ngendlela itafula round. iphrojekthi Environmental enkulisa ziyabonisa futhi imiphumela, okuyinto iqhaza kwezingane nabazali bazo ekufezeni imisebenzi kwemvelo, ukunwetshwa ulwazi abafundi kanye nemindeni ukuvikelwa imvelo, emvelweni idolobha lwendabuko futhi esifundeni, ngcono ngokubambisana neNhlangano abafundi ensimini ngezinyawo, ehlotshisiwe "udoti wakhe "izinto, ezifana - .. yezandla kusuka amabhodlela epulasitiki, njll Imiphumela Visual esisebenzayo alotshwe ifomu wadala ngokuhamba albhamu yephrojekthi odongeni amaphephandaba.
Iphephandaba ingaqukatha izithombe emakhoneni ngithuka bemvelo, iziqephu engahlanzekile e amayadi angu ezithile nokunye okunjalo. Konke eyanyatheliswa udonga iphephandaba esikhashana noma uthatha uhlobo isethulo ngaphansi isiqubulo esithi: "Lokhu akufanele kube"
Omunye izenzakalo ezithakazelisayo kunazo ungaba yisikhulumi esihle Imibuzo kwemvelo on isihloko nokuvikelwa kwemvelo. Ukuziphatha kufanele sibe seduzane kwaqedwa phrojekthi. Izimpendulo zemibuzo izingane bazokwazi ukusebenzisa konke ulwazi wathola.
Ijusi le-apple elenziwe ekhaya eline-pulp ebusika: zokupheka okumnandi